SONSAF | Waxa aan qabano
Halkaan ayaad timid: Home » SONSAF » Waxa aan qabano
Fagaaraha Jilayaasha aan dowliga ahayn ee Somaliland waxa uu taaganyahay in uu noqdo buundadii isku xidhi lahayd shacabka soomaliland iyo maamulada qaran iyo waliba dhinacyadda caalamiga ah ee dejiyo hanaanka iyo siyaasada.
Ujeedadiisu waxay tahay sidii uu ku xaqiijin lahaa siyaasadaha saameynaya nabada iyo horumarka noqdaan kuwa muhiimad u leh kana jawaabaya baahidan ay dadkuqabaan.
Sharcinimada doorka SONSAF waxay kuqotontaa kala duwnaanshaha dadka xubnaha ka ah ee jilayaasha aan dowliga ahayn kwaas oo matala qeybo badan oo ka mid ah bulshada, oo ku kala qeybsan juquraafi ahaan, dhinaca jufada iyo qeybaha kale ee Somaliland.
SONSAF waxay isu keentaa dadka xubnaha ka ah si ay u yeeshaan wadatashi sal-ballaadhan oo ay ka yeeshaan arrimaha muhiimka ee khuseeya nabada iyo horumarka ee Somaliland.Wadatashiyaddan waxay saldhig u noqonayaan qaabka loo dejinayo talooyinka ay SONSAF u soo jeediso beesha caalamka iyo maamuladda qaran.
Qaabkan wadatashiga loo wajahayo waxa uusiinayaa wakiilada SONSAF u qaabilsan siyaasada wada hadalka ogolaansho xooggan wuxuuna ku caawiyaa hubinta in xog-haynta iyo guddigu ay noqdaan kuwo xil iskasaara xubinnimada.
SONSAF waxay abuurtaa xidhiid laba dhinac ah oo ka dhexeeya nabadda iyo horumarka Somaliland.
Wakiilada fagaarahu waxay uga shaqeeyaan siyaasada wada hadalka qaran iyo mida caalami sida soo socota:
Waxay siiyaan dadka siyaasada dajiya macluumaad iyo talooyin ka socda ka jilayaasha aan dowliga ahayn ee ka shaqeeya gobolka ee sida ugu wacan khibrada ugu leh ka hadalka iyo xaalada meesha ka jirta.
Waxay ku caawiyaan dadka siyaasada dajiya ee ka shaqeynaya amniga iyo horumarka Somaliland sidii ay ku wadaagi lahaayeen macluumaadka ku saabsan hannaanada siyaasada iyo natiijooyinka ayagoo la xidhiidhaya qeybo badan oo Soomaaliland ka tirsan kuwaas ooka badan inta ay sida tooska ah ula xidhiidhi karaan.